Sarimihetsika: Andro Iray Hiainana Ny Fiainan’ny Olona Iray Jamba · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 03 Novambra 2011 8:42 GMT
Vakio amin'ny teny македонски, Deutsch, عربي, Español, Français, Italiano, বাংলা, 日本語, Aymara, Ελληνικά, Shqip, 繁體中文, 简体中文, English
Jamba hatrany an-kibon-dreny i Tommy Edison, ary amin'ny alàlan'ny lahatsary YouTube no anehoany amintsika ny fiatrehany ireo asa aman-draharaha sasantsasany izay mitaky fanamby avy aminy toy ny fampiasàna vola taratasy ohatra, ATM, famakiana DVD sy fiampitàna arabe. Izy koa dia mpanao kiana amin'ny sarimihetsika ary ny fomba fijeriny miharo vazivazy no manome antsika topimaso amin'ny fomba ankafizan'ireo manana olana ara-pahitàna ny fiainana.
Soratra Braille avy amin'i Ralph Aichinger CCBy
Ao amin'ny lahatsariny farany indrindra, asehony antsika ny fomba hiampitàny ireo arabe be mpivezivezy: anatinà tranga iray, misy feo fanairana mampahafantatra azy rehefa azo antoka ny hiampitàna, ary amin'ny tranga iray hafa, mila mamantatra ny fandehan'ny fifamoivoizana amin'ny alalan'ny feo manodidina izy, ary aorian'izay vao manandrana manapa-dàlana, izay soritany hoe zavatra tena faran'izay mahatahotra:
Mr. Edison koa dia mpanao kiana aminà sarimihetsika. Izy dia mibanjina manokana ireo mpilalao, ny resaka, ny mozika ary ny fomba fitantaràna, ary araka ny filàzany, manome antsika vina vaovao izy momba ny fomba ahafahan'ireo jamba mahatsapa ny elanelam-panahy ara-pahitàna. Ao anatin'ity fitetezana an-dahatsary ity, misy ampahany izay navela ho mainty ny fàfana nefa ny feo kosa mitohy re hatrany ka manampy ny mahiratra hahatakatra ny fomba hanarahan'ny jamba ny tantara. Ity lahatsary manaraka ity dia ny fijeriny malalaka ny X-Men: First Class.
Raha ny mahazatra dia mandeha any amin'ny trano fandefasana sarimihetsika i Tommy Edison ho an'ireo sarimihetsika alalininy, saingy mijery DVD any an-tranony ihany koa izy. Na izany aza, ny fanomanana ny rehetra momba ilay famakiana DVD nambara fa tsotra izay namidy taminy dia voaporofo fa mbola sarotra tsy araka izay nosaininy. Na dia natolotra amin'ny fiteny maro samihafa aza ny pitsopitsony amin'ny fampiasàna ilay famakiana DVD, tsy ahitàna ny Braille hianarana mampiasa ilay fitaovana vaovao azony izy ireny, fanamby sarotrarotra kokoa.
Ity lahatsary manaraka ity, na eo aza ny teknolojia nampifanarahana amin'ny toetoetr'ireo tratry ny fahasembanana, dia maneho ny tsy fahombiazan'ireo ‘marques’ tahaka ny ao anatin'ny ohatra manaraka etoana amin'ny fampiasàna ny ATM. Raha toa ka tsy dia henjana loatra ny lafin'ny teknolojia, mbola mila miatrika ny fomba fijerin'ny olona ihany koa i Tommy, satria tsy mahatsindry izy ireny noho izy mandany fotoana kokoa rehefa maka ny volany eny amin'ireo milina mibaiko tena mampiasa feo (ATM) natao ho an'ireo olona afaka mahita:
Tsy mandeha irery amin'ny zavatra ataony ing. Edison: Ben Churchill no mamokatra sy mitantana ireo lahatsariny, ary ilay tarika dia mameno ireo tambajotra sosialy, mifanerasera amin'ireo mpanjohy azy: ohatra, mandroso soso-kevitra ny olona ny amin'ny tokony hisian'ny sarimihetsika ho an'ny Kianan'ny Sarimihetsika Jamba mba hojerena fa tsy ho fametrahana fanehoan-kevitra fotsiny eo amin'ny pejiny. Hita any anaty tambajotra sosialy samihafa ihany koa izy.